Ixesha Post: Jun-28-2021
1. Ukuqhuba kwekhompyuter xa uqhuba: Igama elibomvu "ndicela ujonge iibreyikhi zephuli" ziya kuvela kwicala le-alam ngokubanzi. Ke kukho i icon, esisangqa esingqongwe zizibiyeli ezimbalwa ezaphukileyo. Ngokubanzi, ibonisa ukuba isondele kumda kwaye kufuneka itshintshwe kwangoko. 2. Ukuqhekeka ...Funda ngokugqithisileyo »
Yeyiphi eyona nto ibambe iziqhoboshi?
Ukusuka kwiipolishi kunye ne-wax, ukuya kwiifilitha nakwi-oyile ye-injini, ukhetho lukhulu kwaye luyothusa xa kufikwa ekukhetheni iimveliso ezichanekileyo zemoto yakho, iloli, isigqubuthelo okanye crossover. Ukukhetha kuninzi-kwaye ukhetho ngalunye lunezixhobo zalo ezizodwa, izithembiso kunye netekhnoloji. Kodwa yintoni eyona ilungileyo ...Funda ngokugqithisileyo »
Ndazi njani ukuba ndifuna ipads ezintsha zeebhuleki?
Iimpawu zokuba ufuna iipads ezintsha zokuqhekeza. Ngokwesiqhelo, uya kuba nakho ukuxelela xa iiphedi zakho zebreyikhi zinxityiwe ngenxa yotshintsho oluzisa kwisithuthi sakho. Nazi ezinye zeempawu onokuthi uziqaphele xa ilixesha lokufumana iipads zakho zokuqhekeza endaweni yazo: Ingxolo yokusila okanye yokukhwaza xa uzama uku ...Funda ngokugqithisileyo »